နောက်ထပ် Lego Star Wars ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ကောလာဟလများအွန်လိုင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်
13 / 09 / 2021 13 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 494 Views စာ3မှတ်ချက် 18 +, 75153 ကို AT-ST Walker က, 75254 ကို AT-ST Raider ကို, 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း, 75313 ကို AT-AT, Instagram ကို, Lego, Lego ကောလာဟလများ, Lego Star Wars, LEGO.com, အဆိုပါ Jedi ၏ပြန်သွား, Rogue တစ်ခုမှာ, Rogue တစ်ခုမှာ - တစ် Star Wars အကွောငျးအရာ, ကောလာဟလာ, Star Wars, Star Wars: အ Jedi ၏ပြန်လာ, Star Warsဖြေ - အင်ပါယာကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်, Star Warsဖြေ, အင်ပါယာသို့ပြန်သွားရန်ကိုရို, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိုပါ Mandalorian
လာမယ့်နှစ်ဝန်းကျင်မှာကောလဟာလတွေပိုထွက်လာတယ် Lego Star Wars line-up သည်အကျွမ်းတဝင်ရှိသောယာဉ်၏အခြားပြန်လည်ထုတ်ဝေထားသောဗားရှင်းကိုညွှန်ပြသည်။
Instagram သုံးစွဲသူ lego_club_news ကြောင်းအစီရင်ခံစာများ 75322 Hoth AT-ST မျှော်လင့်ထားသော Hoth line-up ကိုကျော်လွန်၍ 2022 ခုနှစ်တွင် စတင်ရောင်းချပါသည်။ 75320 Hoth Battle Pack ဒီနှစ်အတွက်ကောလဟာလတွေ 75313 ကို AT-ATမရ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်နှင်းဖုံးသောဆောင်းရာသီအတွက်သိုလှောင်ထားပုံရသည် Lego Star Wars ဆောင်ပုဒ် - ဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောယခင်ကောလာဟလများကြောင့်နွေ ဦး သို့ဖြစ်နိုင်သည် AT-AT လေယာဉ်မောင်းဦးထုပ်.
ဤနောက်ဆုံး AT-ST သည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည် Lego အုပ်စုသည် The Empire Strikes Back မှ Hoth ဗားရှင်းကိုဖြေရှင်းခဲ့ပြီးယခင်မော်ဒယ်များဖြစ်သော Return of the Jedi, Rogue One နှင့် The Mandalorian တို့ကရေးဆွဲခဲ့သည်။
lego_club_news ၏အဆိုအရအဆိုပါ set ကို US တွင် ၅၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည် AT-ST ၏စျေးအကြီးဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်။ 59.99 ရဲ့ 2016 AT-ST Walker ကို $ 75153 နဲ့ 39.99 မှာရောင်းတယ် 75254 ကို AT-ST Raider ကို ယခု ၄၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်ရနိုင်သည်။
ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက အဲဒါ 75322 Hoth AT-ST ဒီနွေရာသီရဲ့ ခြေရာကို လိုက်လျှောက်မယ့် 18+ set တစ်ခု ဖြစ်လာမယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်းမရ။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အလွန်ကစားနိုင်သောယာဉ်ဖြစ်မည့်အရာအတွက်သိချင်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီးeကိုအကြံပြုသည်xtra လက်ရှိ AT-ST တွင် ၁၀ ဒေါ်လာသည်မော်ဒယ်သစ်အားအသေးစိတ် display အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်အလားအလာရှိသည်။
Instagram သုံးစွဲသူ lego_fulcrum - မူလက p ကိုမျှဝေခဲ့သူart ဤကောလဟာလ၏ - ပိုသိရန်တောင်းဆိုသည် Lego Star Wars ၂၀၂၂ ခုနှစ်စာရင်းအရထို့ကြောင့်နောက်နှစ်ပွဲများအတွက်သတင်းပိုများလာပြီးမကြာမီမကြာမီအွန်လိုင်းပေါ်ရောက်လာလိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့်အတည်ပြုသည်အထိ Lego သို့သော်အုပ်စုအားလုံးကို၎င်းကိုအလွန်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ယူပါ။
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ - Royalty
LEGO နဲ့တူတယ် Star Wars ၂၀၂၂ တွင် Hoth ၌ကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာလိမ့်မည် →
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုနောက်ထပ် Lego Star Wars ၂၀၂၂ တွင်အွန်လိုင်းကောလာဟလများပေါ်ထွက်လာသည်"
မင်္ဂလာပါ ! ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ သတင်းစကား။
သင့်တွင် 2022 ခုနှစ်အတွက် ရထားတွဲနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်တစ်ခုခုရှိပါသလား။
ကျွန်ုပ်၏ဒေသခံ lego အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံမှကြားသိရသည်။
- မိကျောင်းမော်ဒယ်ကိုအခြေခံ၍ အသစ်စက်စက် ရေနွေးငွေ့စက်။
- မြန်နှုန်းအသစ်စက်စက် "city alsthom AGV Amtrak ကို အခြေခံ၍ ရထား။
Andis Voitinsh ဖြစ်သည်
လောလောဆယ်လက်ကျန်အစုံနီးပါးတူတဲ့အစုံကိုပြန်ထုတ်တဲ့အချက်ကိုငါတကယ်နားမလည်ဘူး။ ငါ st walker မှာပြောနေတာသိသာပါတယ်။ ၎င်းသည်ပင်စင်မယူရသေးသော်လည်းအခြားတစ် ဦး တန်းစီနေပြီဖြစ်သည်။ ငါစုထားတဲ့အရာကသူတို့နှစ်ယောက်ကြားကခြားနားချက်မရှိသလောက်ဘဲ
ဤသည်စျေးအကြီးဆုံး AT-ST Lego ဖြန့်ချိခဲ့သည်မဟုတ်။ ထိုခေါင်းစဉ်သည် ၁၈ လက်မအမြင့် ၂၀၀၆ UCS AT-ST ၁၀၀၀ အပိုင်းအစဖြစ်သည်။ ၇၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်လက်လီရောင်းချသည်